Guddoomiyaha ismaamulada oo sheegay in la siyaasadeynayo la dagaalanka musuqmaasuqa. – The Voice of Northeastern Kenya
Guddoomiyaha ismaamulada oo sheegay in la siyaasadeynayo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Guddoomiyaha golaha ay ku bahoben hoggaamiyaasha maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ahna barasaabka ismaamulka Turkina Josphat Nanok ayaa sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa ee wadanka ka socdo uu yahay mid aanan siyaasad ka marnayn.
Waxaa uu si gaar ah u dhaliilay qaabkii loola macaamilay guddoomiyaha dowlad degaanka Busia Sospeter Ojaamong oo maalmo ka hor la xiray maxkamadana la geeyay.
Mr. Nanok ayaa ku andacoonaya in nidaamka la daadajiyay ama dowlad wadaajinta uu khatar ku jiro.
Barasaabka Turkana ayaa su’aal geliyay sababta aanan weli loo xirin madaxda sar sare ee waaxda qaran ee adeega dhalinyarada ee NYS iyo guddiga keydiya dhallagga ee NCPB in kastoo la soo tabiyay fadaeexado kala duwan.
Dowlada dhexe ayuu ku eedeyay inay indhaha shacabka ka weecinayso waxyaabaha ugu waweyn sida sonkorta .
Dhanka kale guddoomiyaha dowlad goboleedka Turkana Josphat Nanok ayaa sheegay in hoggaamiyaasha ismaamulada ay sida madaxweynaha oo kale u baahanyihiin in xasaanad ay lahadaan si inta xilalka ay hayaan aanan dacwad loogu soo oogin.
Mr. Nanok ayaa ku doodaya in iyagaba ay yihiin madaxda dowlad goboleedyada sidaa awgeedna ay dalbanayaan in loola dhaqmo sida hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka oo kale.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii guddoomiyaha Busia Mr.Ojaamong lagu siidaayay damiin lacageed oo dhan hal milyan kadib markii isaga iyo sarakiil kale lagu eedeyay inay si aanan habbooneyn u bixiyeen qandaraas ku kacay 20 milyan oo shilin.
← DHAGEYSO Warka subaxnimo ee star fm 8:00 PM
Darasaad lagu ogaaday in dhalinyarada shaqa raadiska ah ay takoor dareemaan →